Xoghayihii A dibedda Mareykanka ee ugu horreeyay oo madow ahaa oo u dhintey COVID-19 - Jowhar somali news leader
Xoghayihii A dibedda Mareykanka ee ugu horreeyay oo madow ahaa oo u dhintey COVID-19
By Mahad	 Last updated Oct 18, 2021
Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka Colin Powell, iyo qofkii ugu horreeyay ee Madow ah ee taariikhda dalka ee buuxiya jagada, ayaa sida ay sheegeen qoyskiisa u dhintay COVID-19.
Powell oo 84 sano jir ahaa ayaa noqday qofkii ugu horeeyayy oo Madowga Marakanka ee noqda jeneraal afar xiddigle ah sanadkii 2005.
“Si buuxda ayaa loo tallaalay. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno shaqaalaha caafimaadka ee Walter Reed National Medical Center daryeelkooda. Waxaan luminay nin cajiib ah oo jecel, aabbe, awoowe iyo Ameerikaan weyn, ”ayay yiraahdeen qoyska Powell.
Powell oo loo yaqaanay qunyar -socod iyo hawl -yaqaan, wuxuu kaalin weyn ka qaatay qaabaynta siyaasadda arrimaha dibedda ee maamullada madaxweynenimada Jamhuuriyadda muddo tobanaan sano ah.
Wuxuu qabtay jagooyin sare intii lagu guda jiray dhicitaankii Darbigii Berlin, 1989 -kii duulaankii Mareykanka ee Panama, Dagaalkii Gacanka 1991, weeraradii Sebtember 11, iyo duulaankii Mareykanka ee Afghanistan ee 2001 iyo Ciraaq 2003.
Wuxuu ahaa lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore Ronald Reagan intii u dhaxaysay 1987 ilaa 1989 wuxuuna ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay ee Madow ee Taliyayaasha Wadajirka ah ee hoos yimaada Madaxweynihii hore ee Jamhuuriga George HW Bush iyo Madaxweynihii hore Bill Clinton, oo ahaa Dimuqraadi, 1989 ilaa 1993.
Madaxweynihii hore Maraykanka George W Bush ayaa sanadkii 2001 u magacaabay Xoghayihii Arrimaha Dibbada, wuxuuna noqday qofkii ugu horreeyay ee Madow ah ee taariikhda Mareykanka buuxiya doorkaas.
Waqtigaas, wuxuu sidoo kale noqday sarkaalkii ugu sarreeyay ee Madow ee taariikhda Mareykanka, markii dambe waxaa la sinmay Xoghayihii hore ee Arrimaha Dibedda Condoleeza Rice balse waxaa ka sare maray Barack Obama oo noqday Madaxweynihii ugu horeeyay ee Madow ah oo loo dhaariya xilka Madaxtinimada dalka Maraykanka.